Tababare Guardiola oo koobkii ugu horeeyey kula Damaashaaday Bayern.munich oo Ka Fara maroojiyay Koobka Super-cubka Yurub Cheksea. - Cakaara News
Tababare Guardiola oo koobkii ugu horeeyey kula Damaashaaday Bayern.munich oo Ka Fara maroojiyay Koobka Super-cubka Yurub Cheksea.
(CakaaraSport) Sabti August 31,2013.Tababare Guardiola ayaa xalay koobkiisii ugu horeeyey kula guuleystay kooxda Bayern Munich oo markii ugu horeysay taariikhdooda qaaday Super-cupka Yurub ka dib markii ay rigoorayaal kaga badiyeen Chelsea. Kulankan finalka ahaa ee xalay oo la odhan karo wax walbaa wey u dhamaayeen ayaa waqtigii caadiga ahaa kusoo dhamaadey bareejo 1-1 ah ka dib goolal ay kala dhaliyeen Torres iyo Ribery oo labada qeyb ee cayaarta kala dhaliyey. Eden Hazard ayaa u muuqdey inuu noqonayo halyeyga Chelsea markii uu gool qurux badan dhaliyey bilowgii 15kii daqiiqo ee hore ee cayaarta lagu daray si ay u kala baxaan hase yeeshee waxaa taas ka diiday
cayaaryahan Javi Martínez oo xili cayaaryahanada iyo taageerayaasha Chelsea isku diyaarinayeen debaal dega guusha koobkan gool bareejo ah u dhaliyey Bayern ilbiriqsigii ugu dambeeyey ee cayaarta taasoo sababtey in rigoorooyin lagu kala baxo markii ugu horeysay taariikhda koobkan.
bayern30813 Chelsea oo hogaanka cayaarta qabatey bilowga cayaarta waxaa isku xoreeyey Torres oo bakiinka ku dhameystay kulankii adkaa ee Man. United laakiin xalay lagu bilaabay isagoo fursadaas kaga jawaabay inuu gool qurux badan dhaliyo daqiiqadii 8aad ee bilowgii cayaarta. Xidiga habeen hore loo caleemo saaray Cayaaryahanka Sanadka Yurub Franck Ribery ayaa bilowgii qeybtii labaad kasoo guday goolka lagu lahaa kooxdiisa soona celiyey miisaankii cayaarta.
Cayaaryahanka khadka dhexe ee Chelsea ayaa Jaalihii 2aad qaatay cayaartana laga saaray daqiiqadii 85aad taasoo sababtey in Chelsea oo markii horeba daafaceeda adkaa iney sii adkeeyaan iyagoo kusoo ururay agagaarka goolkooda. Goolkii 2aad ee Hazard ka dib Xidigaha Bayern ayaa weerao aan kala go´laheyn ku qaaday goolka Chelsea ilaa daqiiqadii ugu dambeysay xili uu garsoorihii cayaarta afka firimbiga ku hayey uu Martinez oo bedel kusoo galay dhaliyey goolkii bareejada.
Kulankan ayey labada koox isku weerarayeen iyagoo helay fursado badan oo ay goolal ku dhalin kareen hase yeeshee waxaa laf dhuun gashay ku noqdey labada boorte Manuel Neuer oo Bayern ah iyo Petr Cech oo Chelsea hase yeeshee markii ay sheekada rigoorayaal tagtay labada goolhaye kuma guuleysan iney qabtaan 9kii rigoore ee ugu horeeyey ilaa la gaaray rigooradii ugu dambeysay ee 10aad markaasoo boortaha Bayern Neuer badbaadiyey rigooradii Romelu Lukaku.
Kulanka xalay oo ahaa kii 38aad ee finaalaha Super Koobka Yurub waxaa ku kulma kooxaha ku kala guuleysta Champions League iyo koobka Euro League waxaana lagu qabtay garoonka Eden oo ku yaala Magaalada Praha ee dalka Jamhuriyadda Czech.